आज सुनको मूल्य घट्यो, हेर्नुहोस् कति छ ? - pnpkhabar.com
You are at:Home»अर्थ»आज सुनको मूल्य घट्यो, हेर्नुहोस् कति छ ?
आज सुनको मूल्य घट्यो, हेर्नुहोस् कति छ ?
By रबि धिताल on ६ आश्विन २०७५, शनिबार ०२:२३ अर्थ
काठमाडौं, असोज ६:नेपाली बजारमा आज (शनिबार) सुनको भाउ घटेको छ। हिजो प्रतितोला ५८ हजार ४०१ रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुन आज ५८ हजार ९८ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।
त्यस्तै हिजो प्रतितोला ५८ हजार १०४ रुपैयाँमा कारोबार भएको तेजाबी सुन आज ५७ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। आज चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ। हिजो ६ सय २१ रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदीको मूल्य आज ६ सय १७ रुपैयाँमा पुगेको छ।